Warar - Dhul Diatomace loogu talagalay cayayaanka
Earth Diatomaceous For cayayaanka
Weligaa ma maqashay dhulka diatomaceous, oo sidoo kale loo yaqaan 'DE'? Hagaag hadaanay ahayn, u diyaar garow inaad la yaabto! Isticmaalka dhulka diatomaceous ee beerta waa weyn. Dhulka Diatomaceous waa wax soo saar runtii dabiici ah oo dabiici ah oo kaa caawin kara inaad ku beerto beer qurux badan oo caafimaad leh.
Waa maxay Dunida Diatomaceous?
Dhulka diatomaceous-ka waxaa laga sameeyaa dhirta biyaha lafa-guray, waana dabiici ahaan ka soo baxa isku-darka macdanta qashinka ee haraaga dhirta u eg algae ee loo yaqaan diatoms. Dhirtu waxay ka mid ahayd nidaamka deegaanka ee cilmiga deegaanka ee taariikh ahaan taariikh ahaan jiray. Meelaha nuuradda ah ee diatoms ee hadhay waxaa loo yaqaan diatomite. Diatoms-ka ayaa la qodaa oo la shiidaa si loo sameeyo budo muuqaal leh oo u eg sida budada talcum.
Dhulka Diatomaceous waa sunta lagu buufiyo macdanta waxayna ka kooban tahay qiyaastii 3 boqolkiiba magnesium, 5 boqolkiiba sodium, 2 boqolkiiba bir, boqolkiiba 19 kalsiyum iyo 33 boqolkiiba silikoon, oo ay weheliyaan dhowr macdan oo raad raac ah.
Markaad u isticmaalayso dhulka diatomaceous-ka beerta, waxaa aad muhiim u ah inaad iibsato kaliya "Cunnada Darajada" dhulka diatomaceous iyo MA AH dhulka diatomaceous ee jira oo loo isticmaali jiray miirayaasha barkadda dabaasha sannado. Dhulka diatomaceous ee loo isticmaalay miirayaasha barkadaha dabaasha wuxuu marayaa hanaan kala duwan oo badalaya qaabkiisa si loogu daro waxyaabo badan oo ka mid ah silica bilaashka ah. Xitaa markaad codsaneysid dhulka diatomaceous ee fasalka cuntada, waa muhiimadda ugu weyn in la xirto maaskarada siigada si aysan u nuugin wax badan oo ka mid ah boodhka dhulka diatomaceous, maxaa yeelay boodhka ayaa ka xanaajin kara xuubka dheecaanka sankaaga iyo afkaaga. Marka boodhku dego, in kastoo, wax dhibaato ah kuma yeelan doono adiga ama xayawaankaaga.
Waa maxay Dhulka Diatomaceous ee Loogu Adeegto Beerta?
Isticmaalka dhulka diatomaceous waa badan yihiin laakiin jardiinada dhexdeeda dhulka diatomaceous waxaa loo isticmaali karaa sidii cayayaan dil. Dhulka diatomaceous wuxuu u shaqeeyaa si looga takhaluso cayayaanka sida:
Dadka waaweyn ee Dhirta Beeraha Le'eg
Baranbarooyinka Snails Slugs
Cayayaankaan, dhulka diatomaceous waa boodh dilaa ah oo leh cidhifyo fiiqan oo microscopic ah oo ka gooyay daboolka difaaca oo qalalaya.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ay leedahay dhulka diatomaceous ee loogu talagalay xakamaynta cayayaanka ayaa ah in cayayaanka aysan haysan waddo ay ku dhisaan iska caabin, taas oo aan lagu dhihi karin sunta cayayaanka ee kiimikada badan.
Dhulka diatomaceous waxba uma yeeli doono dixiriga ama mid ka mid ah sheyga faa iidada ugu leh ciidda.
Sida loo Codsado Dhulka Diatomaceous
Meelaha ugu badan ee aad ka iibsan karto dhulka diatomaceous waxay yeelan doonaan tilmaamo dhameystiran oo ku saabsan dalabka saxda ah ee sheyga. Sida sunta cayayaanka oo kale, hubi inaad si fiican u aqriso qoraalka oo aad raacdo tilmaamaha dusha ku yaal! Tilmaamaha waxay ka koobnaan doonaan sida saxda ah ee loogu adeegsan karo dhulka diatomaceous (DE) labadaba beerta iyo gudahaba si loo xakameeyo cayayaanka badan iyo waliba sameynta carqalad noocyo iyaga ka dhan ah.
Dhulka dhexdiisa diatomaceous waxaa loo isticmaali karaa sidii boodh la mariyo boodh la mariyey oo loo oggolaaday adeegsigaas; mar labaad, waa muhiimadda ugu weyn in la xidho maaskarada siigada inta lagu guda jiro isticmaalka dhulka diatomaceous qaabkan oo loo daayo maaskaro ilaa aad ka tagayso aagga boodhka. Ka fogee xayawaannada iyo carruurta aagga siigada illaa boodhku ka degaayo. Markaad u adeegsanayso sidii dalab boodh ah, waxaad u baahan doontaa inaad ku daboosho dusha iyo hoosta dhammaan caleenta ciidda. Haddii roobku da'o isla marka la codsado boodhka ka dib, waxay u baahan doontaa in dib loo mariyo. Waqti aad u wanaagsan oo la sameeyo dalabka boodhka ayaa ku habboon roob dabacsan ama subaxa hore marka dharabku saaran yahay caleemaha maadaama ay ka caawineyso boodhku inuu si fiican ugu dhego caleemaha.
Tani runti waa wax soo saar la yaab leh oo dabiici ah oo loo isticmaalo jardiinooyinkeenna iyo agagaarkeenna. Ha iloobin inay tahay “Fasalka Cuntada” ee dhulka diatomaceous ee aan u dooneyno jardiinadeenna iyo adeegsiga guriga.
Waqtiga dhejinta: Jan-02-2021